काठको बाकसमा फर्किए कमाउन विदेशिएका ८ सय नेपाली ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
-गत जेठमा वैदेशिक रोजगारका लागि ओमान पुगेकी मोरङको लेटाङकी अप्सरा दाहालको शंकास्पदरुपमा मृत्यु भयो । चक्कु लागेर घाइते भएकी अप्सराले अस्पतालमै प्राण त्यागेकी थिइन् । उनको हत्या भएको आशंका छ ।
यता सरकारले अनेक देशभित्र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने गफ हाँकिरहेको छ, अर्कोतिर रोजगारीकै लागि विदेशीका युवाहरु यसरी मृत्युवरण गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक ३ नेपालीहरु बन्द बाकसमा आउँछन् भन्ने तथ्यांक पनि पुरानो भइसक्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएको समाचारले सम्वन्धित परिवारजन वा आफन्तबाहेक अरुलाई छुन छोडिसक्यो ।
विदेशमा मृत्युवरण गर्नेका परिवारलाई केही रकम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफ्नो ‘कर्तव्य’ पूरा गरेको ठानिरहेको छ । तर, क्षतिपूर्तिको सानो रकमले त्यो परिवारमाथि लागेको घाउमा के मल्हमपट्टि लगाउन सक्थ्यो ?
यो पनि पढ्नुहोस ‘हरि घर त आए तर, रातो कफिनमा’
यो पनि पढ्नुहोस छोरा ! उठ न
किन हुन्छ मृत्यु ?
यो पनि पढ्नुहोस घाट, काठ र खाटको कनेक्सनः कफिनमाथि सुत्छन् शहरका करोडपति